Waa maxay dayaxu: sifooyinka, qaab -dhismeedka iyo dillaacyada | Saadaasha Hawada
Waa maxay dayaxa
Jarmal Portillo | 31/08/2021 14:10 | Ciencia
Meeraheena wuxuu leeyahay jidh samaareed oo ku dul wareega oo loo yaqaan dayaxa. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira waxaan aragnaa xilliyada habeenkii, dad badan ma oga runtii waa maxay dayaxa. Waxaan ka hadlaynaa dayax -gacmeedkayaga oo sababa xoogagga cuf -is -jiidadka ee ka soo bilowda hirarka iyo dhinacyada kale ee Dhulka. Dayax -gacmeedkayagu wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo aad u xiiso badan in la ogaado.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno waxa uu dayaxu yahay, astaamaha uu leeyahay, dhaqdhaqaaqiisa ugu weyn iyo godadkiisa.
1 Waa maxay dayaxa
2 Waa maxay dhaqdhaqaaqyada dayaxu sameeyo?
Dayaxu waa dayax -gacmeedka dabiiciga ah ee dhulka iyo dayax -gacmeedka kaliya ee dhulku leeyahay. Dabcan, waa jidh samaa oo dhagax ah oo aan lahayn faraanti ama dayax gacmeed. Waxaa jira dhowr aragtiyood oo lagu sharraxayo samayskiisa, laakiin waxa ugu badan ee la aqbalay ayaa ah in asalkeedu dhacay qiyaastii 4,5 milyan oo sano ka hor, ka dib markii shay u eg Mars uu dhulka ku dhacay. Dayaxu wuxuu ka samaysmay jajabyadan, 100 milyan oo sano ka dib, magma la dhalaaliyay ayaa dhalaashay oo samaysay qolofka dayaxa.
Dayaxa wuxuu dhulka u jiraa qiyaastii 384 kiilomitir. Qorraxda ka dib, waa jidhka samada ugu dhalaalaya oo laga arko dhulka dushiisa, in kasta oo dusha sare uu mugdi yahay. Waxay ku wareegeysaa dhulka 400 maalmood oo Dhul (27 maalmood ama 27 saacadood) waxayna ku socotaa xawaare isku mid ah. Sababtoo ah waxay si isku mid ah ula wareegtaa dhulka, dayaxu wuxuu leeyahay weji isku mid ah. Teknolojiyadda hadda jirta awgeed, waxaa la wada ogsoon yahay in “wejiyada qarsoon” ay leeyihiin godad, niyad -jabka loo yaqaan thalassoids, oo aan lahayn bad.
Indha -indhaynta dayaxu waa sida dadka oo kale. Magaciisu wuxuu ka muuqdaa xadaarado badan sidoo kale wuxuu qayb ka yahay khuraafaadkooda. Waxay saamayn muhiim ah ku leedahay meertada Dhulka: waxay nidaamisaa dhaqdhaqaaqa Dhulka xaggiisa, taas oo ka dhigaysa jawiga mid deggan. Maxaa ka sii badan, Waxay sabab u tahay mawjadaha dhulka maxaa yeelay waxaa soo saaray soo jiidashada cuf, kaas oo biyaha si xoog ah u jiidaya dhinacna ka soo jiidaya, taas oo keenta hirar iyo hirar hoose.
Waa maxay dhaqdhaqaaqyada dayaxu sameeyo?
Sababtoo ah jiritaanka xoog -is -jiidjiid u dhexeeya dayaxa iyo dhulka, dayax -gacmeedkan ayaa sidoo kale leh dhaqdhaqaaq dabiici ah. Sida meeraheena oo kale, waxay leedahay laba dhaqdhaqaaq oo gaar ah, oo la yiraahdo wareeg iyo tarjumaad dhulka oo dhan. Dhaqdhaqaaqyadani waa astaamaha dayaxa waxayna la xiriiraan hirarka iyo wejiga dayaxa.
Wuxuu u baahan yahay xoogaa waqti ah si uu u dhammeeyo dhaqdhaqaaqiisa. Tusaale ahaan, wareegga tarjumaadda oo dhammaystiran wuxuu qaataa celcelis ahaan 27,32 maalmood. Waxa xiiso leh, tani waxay ka dhigaysaa in dayaxu mar walba na tuso weji isku mid ah, waxayna u muuqataa mid gabi ahaanba go'an. Tan waxaa u sabab ah sababo badan oo joomatari ah iyo dhaqdhaqaaq kale oo loo yaqaan gariirka dayaxa.
Marka dhulku ku wareego qorraxda, dayaxu sidoo kale wuu wareegaa, dhulka se waa xagga bari. Inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa oo dhan, masaafada u jirta dayaxa ilaa dhulka aad bay u kala duwan tahay. Masaafadani waxay gebi ahaanba ku xidhan tahay marka ay ku jirto meereheeda. Sababtoo ah meereedka ayaa aad u qasan oo marmarna fog, qorraxdu waxay saamayn weyn ku leedahay cufkeeda.
Dhaqdhaqaaqa dayax -gacmeedkeenna wareega ayaa la jaanqaadaya tarjumaadda. Waxay socotaa 27,32 maalmood, marka had iyo jeer waxaan aragnaa isla dhinaca dayaxa. Tan waxaa loogu yeeraa dayaxa dhinac dhinac ah. Inta lagu jiro wareegga, waxay sameysaa xagal u janjeerid ah 88,3 darajo marka loo eego diyaaradda ellipse -ka tarjumaadda. Tan waxaa sabab u ah xoogga cuf -is -jiidadka ee ka dhex dhasha dayaxa iyo dhulka.
Dayaxu wuxuu leeyahay dhagaxa adag ee adag, astaamihiisa ugu mudanna waa joogitaanka godad iyo saxanno tiro badan. Sababtoo ah jawigeedu waa mid aad u daciif ah oo ku dhawaad ​​aan jirin, uma adkeysan karo saameynta asteroids, meteorites ama meydadka kale ee samada, taasoo u oggolaaneysa inay ku dhacaan dayaxa.
Saameyntu waxay kaloo soo saartay lakab jajab ah, oo noqon kara dhagaxyo waaweyn, dhuxul, ama boodh wanaagsan, oo loo yaqaanno lakabka dillaacay. Aagga mugdiga ah waa weel daboolay lava qiyaastii 12-4,2 milyan oo sano ka hor, iyo aagga dhalaalaya ayaa ka kooban waxa loogu yeero buuraleyda. Guud ahaan, marka dayaxu buuxsamo, waxay u muuqataa inay u ekaanayso muuqaalka wejiga aadanaha ama bakaylaha marka loo eego dhaqammada qaarkood, inkasta oo dhab ahaan meelahaasi ay ka dhigan yihiin halabuurka iyo da'da dhagaxa kala duwan.
Jawigeedu, oo loo yaqaanno exosphere, aad buu u dhuuban yahay, daciif yahay oo dhuuban yahay. Sababtaas awgeed, isku dhaca meteorites, comets iyo asteroids oogada ayaa ah kuwa soo noqnoqda. Dabaylaha oo kaliya keeni kara duufaanno boodh ah ayaa la diiwaangeliyaa.
Saynisyahannadu waxay darsayeen da’da dhagaxyada meeraheena iyo dayaxa. Dhagaxaani waxay ka yimaadaan aag calaamadeysan oo go'aamin kara goorta godka la sameeyay. Iyada oo daraasad ku samaysa dhammaan meelaha dayaxa ee midabkoodu ka khafiifsan yahay loona yaqaanno plateaus, saynisyahannadu waxay heleen macluumaad ku saabsan samayska dayaxa. Waxaa la sameeyay qiyaastii 460 ilaa 380 milyan oo sano ka hor, iyo inta kale ee dhagaxyada ah ee ku dul dhacay dayaxa dushiisa ayaa soo sheegay inay si dhakhso ah u samaysantay. Roobkii dhagaxa ahaa wuu joogsaday oo godad yar baa samaysmay ilaa markaas.
Qaar ka mid ah muunadaha dhagaxa ee laga soo qaaday godadkaas waxaa lagu magacaabaa basas iyo da'deedu waa qiyaastii 3.800 ilaa 3.100 milyan oo sano. Waxa kale oo jira shaybaarro shay aad u waaweyn oo u eg asteroid oo ku dhuftay dayaxa markii dhagaxii dhacay istaagay.
Wax yar ka dib dhacdooyinkan, lafo fara badan ayaa buuxisay weelalkii oo dhan waxayna samaysay badweyn mugdi ah. Tani waxay sharraxaysaa sababta ay godadku ugu yar yihiin badweynta, laakiin waxaa jira godad badan oo ku yaal bannaanka. Waa dhab sababta oo ah dusha sare ee dayaxa ayaa lagu duqeeyey meerayaashan intii lagu guda jiray samaynta nidaamka qorraxda, ma aysan jirin qulqullo farabadan oo ku qulqulaya bannaanka oo sababay in godadkii asalka ahaa la waayo.
Qaybta ugu fog ee dayaxa waxay leedahay hal “bad” oo kaliya sidaa darteed saynisyahannadu waxay aaminsan yihiin in aaggan waxaa matala mooshinkii dayaxa 4 bilyan oo sano ka hor.
Si aan u baranno godadka dayaxa, waa inaan fahamnaa juqraafiga dayaxa. Iyo dhowr bannaan oo fidsanaa ama mar ahaan jiray badda. Layaab ma leh, sidoo kale waxaa jira badweyn dayaxa dayaxa. Midda ugu weyn waa Mare Imbrium, oo la yiraahdo Mar de Lluvia oo Isbaanish ah, dhexroorkeedu yahay qiyaastii 1120 kilomitir.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto waxa dayaxu yahay iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay dayaxa
Waa maxay meteorite